lundi, 11 janvier 2021 20:24
Pilo kely : 1 miliara ariary isan'olona ny teti-bola n'ny Loholona vaovao
16,558 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny andrim-panjakana Loholona amin'ity taona 2021 ity, Loholona miisa 18, izany hoe raha atao kajy tsotra dia 1 miliara ariary isaky ny Loholona no laniana ampandeha ny asa.
Latsaka an'io tetibola io ny tetibola teo aloha ho an'ny Loholona 63 isa nolazaina fa fandaniam-bola ka ampiasaina ananganana Oniversité.
Volamena 82kg ny sandan'io tetibola fampandehanana ny andrim-panjakana io ao anatin'ny 1 taona, izany hoe volamena 2 andro amin'ny volamena mivoaka antsokosoko eto Madagasikara.
lundi, 11 janvier 2021 20:08
Tinoka Roberto : Natao hanokanana ireo fotodrafitr’asa efa natomboka ny taona 2021
Nanao jery todika ny asa vita ary nanoritra ny lalana hizorana amin’ity taona vaovao 2021 ity ny minisitry ny fanatanjahantena sy ny tanora Tinoka Roberto nandritry ny fananganan-tsaina voalohany teo amin’ny “Place Goulette” Ambohijatovo androany alatsinainy 11 janoary 2021.
Nambaran’ny minisitra fa ny taona 2021 dia natao hanokanana ny fotodrafitr’asa izay efa natomboka, toy ny kianja mitafo manarapenitra miisa 15, dobo filomanosana olimpika 2 ary kianja manarapenitra miisa 30.
Vinavinaina ho sivy volana ny faharetan’ny fananganana izany.
Tanjon’ny ministera ny hitsinjara mitovy ny fananganana fotodrafitr’asa toy izao isam-paritra mba tsy hitanila, ary efa ao anatin’ny fanomanana sahady ny fampiantranoana ny lalaon’ny Nosy 2023.
lundi, 11 janvier 2021 20:07
Marodoka-Nosy Be : Lehilahy lehibe iray hita faty nihantona tamin'ny hazo
Hatairana ny an'ny olona nahita faty nihantona tamin'ny sampan-kazo iray tao Marodoka, Nosy Be androany atoandro.
Lehilahy manodidina ny 50 taona eo ilay hita faty. Tsy mponina ao amin'ny Fokontany izy io raha ny angom-baovao hatreto.
COVID-19 : Nisy fitomboana tranga taorian’ny fetin’ny faran’ny taona
234 ny marary vaovao, 149 ireo sitrana vaovao ary 05 nodimandry. Santionany amin’ny tarehimarika mikasika ny valanaretina Covid-19 herinandro taorian’ny fety, teo anelanelan’ny 2-8 janoary 2021, ireo.
Faritra miisa 11 no nahitana ireo tranga vaovao ireo, saingy ny Faritra Analamanga sy Boeny no be tranga maro indrindra.
lundi, 11 janvier 2021 13:38
Raharaha volamena 73,5 kg : Nandray ny solontenan’ny Masoivohon’i Afrika Atsimo ny Minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy
Nandray ny solontenan’ny Masoivohon’i Afrika Atsimo ny Minisitry ny Raharahambahiny malagasy, Dr Tehindrazanarivelo Djacoba A.S. Oliva, ny tolakandron’ny alahady 10 janoary 2021. Ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko milanja 73,5 kg no votoantin’ny dinika.
Nisy ny fangatahana fiaraha-miasa ara-pitsarana eo amin’ny tany roa tonta, mba hamerenana ireo harem-pirenena ireo eto Madagasikara sy ireo izay tratra tany Afrika Atsimo tamin’izao raharaha izao.
Natolotry ny Minisitra mivantana tamin’ny solontenan’ny Masoivohon’i Afrika Atsimo ny antonta-taratasy mirakitra izany fangatahan’ny Fanjakana malagasy izany.
lundi, 11 janvier 2021 13:37
11 janvier : Journée mondiale "merci"
11 janvier : Journée mondiale "merci".
lundi, 11 janvier 2021 11:49
Volamena 73.7kg : Nanainga ny fiaramanidina manokana mitondra ireo iraky ny Firenena Malagasy ho any Johannesburg
Nanainga io maraina io ny fiaramanidina manokana, ho any Johannesbourg Afrika atsimo, nitondra ireo iraky ny Firenena Malagasy miaraka amin'ireo mpisolovava hanao fifampiraharahana ny amerenana ireo volamena malagasy, sy ampodiana ireo nitondra ny entana ho tsaraina aty Madagasikara.